कस्तो छ यो वर्ष प्रधानमन्त्रीको टीका लगाउने तालिका ? हेर्नुस् – Everest Dainik – News from Nepal
कस्तो छ यो वर्ष प्रधानमन्त्रीको टीका लगाउने तालिका ? हेर्नुस्
काठमाडौं, असोज ३१ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विजयादशमीका दिन टीका लगाइदिने र टीका ग्रहण गर्ने समय तय भएको छ ।
विजयादशी अर्थात् टीकाको दिन प्रधानमन्त्री ओलीले पिता मोहनप्रसाद ओलीको हातबाट बिहान १० बजे टीका लगाउने छन् । त्यसपछि उनले आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीलाई टीका लगाइदिने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दिउँसो १ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातबाट टीका लगाउने कार्यक्रम पनि तय भएको छ ।
उनले टीकाको दिन दिउँसो २ बजे मन्त्री, सांसद, पार्टीका नेता, सुरक्षा अधिकारीहरु, लगायतलाई टीका लगाइ दिने छन् । दिउँसो साढे ३ बजेपछि पार्टीका कार्यकर्ता र सर्वसाधारणलाई तथा साँझ ६ बजेपछि परिवारका सदस्यहरुलाई टीका लगाइदिने कार्यक्रम तय भएको सचिवालयले जनाएको छ ।
एकादशीदेखि चतुर्दशी अर्थात कार्तिक ६ गतेसम्म बिहान ९ देखि ११ बजेसम्म उनले पार्टीका कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई टीका लगार्इ दिने छन् ।
यसैबीच, २२ वर्षपछि गएको वर्ष टीका लगाएका नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले भने यस वर्ष टीका लगाउने छैनन् । छोरा प्रकाशको निधन भएको १ वर्ष पूरा नभएकाले उनले यसपटक टीका नलगाउने प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ । -उज्यालो अनलाइन
ट्याग्स: cpn, dashain, oli, pm oli, Tikaa
गल्फको पुरुष टिम इभेन्टमा पनि नेपाललाई स्वर्ण, स्वर्ण संख्या ३९ पुग्यो
हप्तैपिच्छे दुर्घटना, अनाहकमा ज्यान गुमाउँदै पैदलयात्री
१३ औँ सागः नेपालद्वारा माल्दिभ्सलाई १६४ रनको लक्ष्य
श्रीलंकासँग नेपाल पराजित, पूरा भएन फाइनल पुग्ने सपना